Uma othile ekulindele ukuthi ngemuva kokuhlukaniswa noDmitry Tarasov, u-Olga Buzova uzobe ecindezeleke kakhulu futhi apheleke kwizikrini ze-TV, iphutha kakhulu. Ngakho wenze ngempumelelo imali yakho yesehlukaniso, njengoba kwenza u-Olga Buzova, kwakungenakwenzeka kunoma ubani okwamanje.
Enye yezihloko zengeniso e-Buzovaya kwakungokukhangisa kwi-Intanethi. Njengoba ababhalisile abangaphezu kuka-9.6 million ku-Instagram yakhe, Buzov ikhangisa ngenkuthalo zonke izinhlobo zezimpahla namasevisi.
Kuthiwa ukuthunyelwe okukodwa kokubambisana kwe-microblogging ye-"Doma-2" eholela phambili kubakhangisi abangaphansi kwama-ruble ayizinkulungwane ezingu-200. Asikho isidingo sokuba nemfundo yokubalwa kwemali ukubala ukuthi u Buzova uzothola kangakanani ukukhangisa kwi-intanethi, uma izikhangiso zentengiso zivela ezithombeni zakamuva zakamuva zenkanyezi nsuku zonke.
Intombi entsha kaDmitry Tarasov ithatha isinkwa sika-Olga Buzovoy
Ngomusa omusha, u-Olga Buzova, owayengumkakhe, unabalandeli abambalwa kakhulu: Abakwa-Anastasiya Kostenko's Instagram bafundwa ngabalandeli abangu-311,000 kuphela. Nokho, izifiso ze intombi kaDmitry Tarasov zikhulu. Isibonelo esivela ku-Salsk sesivele sizama ukuncintisana no-Olga Buzovoy, ngemuva kokubamba abaqashi bendoda yangaphambili yomdlali webhola. Kuze kube yamuva, ku-Instagram u-Anastasia Kostenko kwakungekho okuthunyelwe kokukhangisa okukodwa. Manje, uma igama lakhe lingapheli emakholomu wezindaba ezihlambalazayo ezihlobene nesahlukaniso seTarabuzikov, uKostenko uzama ukwenza imali ekukhangiseni.
Ngesonto elidlule, ividiyo yokukhangisa ibonakale kwi-microblog ye-Anastasia. Khona-ke ababhalisile bahlambalaza kakhulu intombazane, onenkinga ecacile enesiqanjiwe. Mayelana nesimemezelo esingaphumelelanga ku-Instagram, u-Anastasia Kostenko watshelwa ngokuningiliziwe nge-Portal Information yezwe lamaSoviet. Naphezu kokugxeka ekhelini lakhe, u-Anastasia Kostenko uyaqhubeka nokwenza imali ekukhangiseni. Namuhla i-Nastia ishicilele okuthunyelwe okusha kokukhangisa kumazinyo amhlophe:
Kuyaphawuleka ukuthi inyanga nengxenye edlule isaziso esinjalo sivele ku-Instagram sika-Olga Buzova:
Kubonakala sengathi ubuhle besifundazwe buvele buthaka kuphela umyeni we-"Doma-2" inkanyezi, manje u-Anastasia Kostenko uzothatha u-Olga Buzova nemali yakhe engenayo kwi-intanethi ...
Imvelo ezinganeni ihlala: ababhalisile bakaFiliphu Kirkorov beshaywa ngokudansa komntwana uRudkovskaya (ividiyo)
Sibone konke: i-swimsuit entsha u-Anastasia Volochkova ayihlanganisi lutho, isithombe
UMilla Jovovich akacabangi ngesisindo esiningi ngemva kokubeletha
Biography of actress Irina Apeksimova
Ukungalali emithathu yokukhulelwa
Izakhiwo zokwelapha ze-thistle: uhlelo lokusebenza, izindlela zokupheka, ukuphikisana
Izitayela zekhanda ngezandla zabo
Iyini imfihlakalo yefomu elihle lomzimba kaPutin: umdlalo, ukudla okunomsoco noma ithebulethi yokungafi?
Ukunakekelwa kwe-Nail ne-cuticle
Shish kebab kusuka turkey kuya steamed
Ukuhlanza Ukubukeka Kwama-Mechanical
Izindlela zokujezisa nokukhuthaza izingane zethu